MYU SHADAN: October 2013
အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း၊ သတင်း ကေအိုင်စီ
Posted by myu shadan at 10:23 PM No comments:
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကွန်ဖရင့်အား ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မ တော်ဌာနချုပ် လိုင်ဇာမြို့တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ သုံးရက်ကြာကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
ညီလာခံတက်ရောက်သူများအား လိုက်လံနှုတ်ဆက်နေသော KIO ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်
“ကျနော်တို့ ကွန်ဖရင့်ကျင်းပရေးကော်မတီ အရင်ဖွဲ့တယ်။ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ယောက်ပါတယ်။ ကော်မတီခေါင်းဆောင်က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂမ်ရှောင်ပေါ့။ ဒု ခေါင်းဆောင်က ပဒိုကွယ်ထူးဝင်း၊ နိုင်ဟံသာက အတွင်းရေးမှူး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလက တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးပါ” - ဟု တက်ရောက်သူတဦးက ပြောပါသည်။
အများသဘောတူညီချက်အရ လိုင်ဇာမြို့၌ ယနေ့ စတင်သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ထိပ်သီး ခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးအား ‘တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ကွန်ဖရင့်’ ဟု သတ်မှတ်ကြောင်းကြားသိရပါသည်။
ကွန်ဖရင့်ကျင်းပရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ သတင်း၊ ဓါတ်ပုံ အချက်အလက်များ ကော်မတီခွင့်ပြုချက် မရဘဲပြင်ပ သို့ပေးပို့ခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုရဟု ပါရှိသောကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အခြား အချက်အလက်များ ပြော ပြရန် အချိန်စောသေးကြောင်း တက်ရောက်သူတဦးက ပြောပါသည်။
နိုဝင်ဘာပထမပတ်အတွင်း တတိုင်းပြည်လုံးအပစ်ရပ်ရန် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ပြင်ထားသောကြောင့် ကြိုတင်ပြင် ဆင်သည့်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိပ်သီးများ လိုင်ဇာ၌ တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လိုင်ဇာကွန်ဖရင့်တွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ၁၈ ဖွဲ့ မှ ခေါင်းဆောင် များ၊ ကိုယ်စားလှယ်တော်များ ၆၀ ကျော်တက်ရောက်ပါသည်။
Posted by myu shadan at 9:53 PM No comments:
Posted by myu shadan at 9:50 PM No comments:
Posted by myu shadan at 9:37 PM No comments:
Posted by myu shadan at 9:27 PM No comments:
Tsaw ra hkung ga ai KIO seng ang ai kani pat jasan komiti ni hpe tang shawn mayu ga ai . Sinna Gin wang Ba (2) , Dung (14) niaGinra Nambyu (Namhkam) mare kataeKani Namhpam gaw myu sha yawngahpyen nga ai laika ni grai shakap da tim , Shang lawt ASUYAarung rai nga ai Ja hpawng ni hpe yu reng ai rung (hpawng rung ) wang hta gaw kani namhpam hpe wang lu wang lang lu sha nga ai hpe sa yu mu nngai . Dai Hpawng rung wang kata kaw gaw miwa mungdan na miwa lauban ni hpe mung nga shangun da ma nna Yawng gaw kani namhpam, Yama hpe nhkrit ntsang wang kata dan dan leng leng lu sha nga ma ai . Bung li hte seng nna dai rung de sa jang kani sama shawng hkap tau la nga ga ai re . Mare masha ni lu sha nga ai chye yang gaw sa rim ma ai . Dai rung kata Lauban ni hte Salang ni lu sha nga ai hpe gaw kadai nsa rim nkahtawk ma ai . Mung shawa ngaianingmu hku nga yang gaw ndai lam gaw gara hku mung nhtap htuk ai ngu mu mada nngai , seng ang ai ni hku nna yu sagawn let ang ai hku lajang na hpe ra sharawng let shi htawn dat nngai .
Posted by myu shadan at 8:48 PM No comments:
ကွန်ပျူတာနဲ့ ဗီဒီယိုကြည့်ကြတဲ့သူများအတွက် အရည်အသွေးကောင်းပြီး Format တော်တော်များများကို ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် 3D ဗီဒီယိုများကိုလည်း အရည်သွေးကောင်းမွန်စွာ ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ CyberLink.PowerDVD နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်ကကြိုက်တဲ့လင့်ကနေ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Google Drive | FileCloud | Zippyshare | Rapidshare | Sharebeast
By ; Nyinaymin
Posted by myu shadan at 8:32 PM No comments:
Posted by myu shadan at 8:30 PM No comments:
စာအုပ်အမည်း1000 PhotoShop Tricks
အရွယ်အစားးpdf
အရွယ်အစား3း2.8MB
ဒီစာအုပ်လေးက ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရန် အနည်းပညာပေါင်း 1000 ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရန် ဝါသနာပါသူတွေအတွက် အများစွာထောက်ကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာအုပ်လေးရဲ့  အားနဲချက်ကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာရန်လွယ်ကူအောင် ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ လေ့လာချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေက အောက်မှာ Downland ယူသွာပါ။
Mediafire | Google Drive | Direct Lint
Ya KIO hte Myen sim sa lam hta mung lapran salang galaw nga ai ,Moi htung hkring ning baw mung galaw lai wa sai , Sut du kaba mung re ai ,WUNPAWNG sha yawngehkung ga ai ,ngai mung hkung ga dik ai Ningbaw wa gaw 2013,10,22 shana ,MYITKYINA masat (2) balik dap lai kaw na CITY PART KTV kaw mahkawn kasha ni hte pyaw chyai di nga ai hpe mu ai shaloi ngai Ma kaba hte Mau mat ai le .Hpa majaw rai ? sari rawng ai sari kaba ai ning baw ngai mi ndai hku rai na tinangakasha pan ram sha re ai Mahkawn kasha ni hte pyaw ar taw ai gaw tara shang ai i ?
Matut manoi bai myit yu yang ,,,,,,,anhte myu shayi ni grai hten za wa ma ai hpe myit yu yang Myen niamajaw hten ai gaw kaang hkup , Wunpawng lauban ni jahten ai she grau law taw ai hpe mu lu nga ai le .Kaning re ai wunpawng mahkawn kasha hpe mung gumhpraw hte jahten shalen kau ai gaw kaga nrai jinghpaw lauban ni chyu rai ma ai ,.Masha shawaamanegaw sari chyu rai ,shana KTV hkan ar kabreng hkawm ai gaw madu jan kasha ni mung nchye ma ai i ???????? An hte wunpawng sha ni gaw malawng Madu yesu hpe chye ai ni hkrai re , Madu Yesu nra ai bung li hpe lagu galaw nga ai masha gaw shiaganing re ai amu hta mung awng dang na nre ngu ngai gaw shadu ai . Madu Yesu ari jaw ai hpe pi katut na re ngu shadu ai ...
Chyeju hte Lauban ni Ningbaw ning la nie,nanhte hpe anhte ramma ni gaw lam shagu hta kasi la hpaji la yu kaba nga ai rai ga ai .Anhte ramma ni kasi la shut ai hpan gaw n,galaw yang kaja na re ngu shadu nngai law ..............
Posted by myu shadan at 10:52 AM No comments:
အောက်တိုဘာ (၂၂) ညနေ ၄ နာရီခွဲအချိန်၌ အစိုးရတပ်မ (၃၃၂)၊ (၇၇) တို့စစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းသည် မုန်းဒိန်ပါ ကျေးရွာကို ၀င်ရောက် လာပြီး ရွာသူရွာသား (၅၀၀) ကျော်ကို ဘုရာကျောင်းဝင်းသို့ စုစည်းချုပ်နှောင်ထားကြောင်း၊ ထိုသို့ပိတ်လှောင်ထားခြင်းကြောင့် အသက်(၇၈) နှစ်အရွယ် အဘွားအို ဒေါ်ဖော်လုကော့သည် အောက်တိုဘာ (၂၃) ညနေ ၁း၀၀ နာရီအချိန်၌ ကြောက်လန့်၍ နှလုံးရပ်ေ သဆုံးသွားခဲ့ကြောင့်၊ ယောက်ကျားများ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားကြသောကြောင့် ဒေါ်ဖော်လုကော့၏ အလောင်းကို ထမ်းသဂြိုလ်ရန်လူမရှိ၍ ယခုပင်ဖြစ်သလို ပြင်ဆင်ထားကြကြောင်း၊ ၀န်းရံထားသော စစ်တပ်မှ ကူညီညွှန်ကြားမှု တစုံတရာမရှိကြောင်း ကြားသိရသည်။
အောက်တိုဘာ (၂၃) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁း၀၀ နာရီအချိန်၌လည်း ရွာမှ သင်းထောက်ဆရာ ဦးမွေဖုဂမ်အောင် နှင့် ရွာသားတစ်ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြရာမှ သတင်းတစုံတရာမကြားရ သေးကြောင်းသိရှိရသည်။
Posted by myu shadan at 10:24 AM No comments:
အဲဒီ software လေးကတော့ format type တော်တော်များများ ကိုပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ video converter လေးဘဲဖြစ်ပါတယ် ။ပြောင်းပေးနိုင် တဲ့ format type များကတော့ AVI, DivX, XviD, MPEG, DAT, WMV, ASF, RM, RMVB, MOV, QT, MP4, M4V, 3GP, FLV and MKV စတဲ့ format type တွေကို support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဓာတ်ပုံ format type များဖြစ်သောBMP.GIF.JPG.PNG စတဲ့Format type တွေကို supportလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Im Too Video Converterရဲ့ ထူးခြားချက်မှာတခြား Coveter တွေနဲ့ မတူဘဲ Video clip တစ်ခုကိုဖြတ်တောက်လို့ ရသလို Video Clip တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်လို့ ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Video colour effect တွေကိုနှစ်သက်သလိုပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လိုချင်တဲ့သူများအောက်မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by myu shadan at 11:44 PM No comments:
Format မျိုးစုံကို Software တစ်ခု တည်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန် ဆန် ဟြေင်းနိုင်လို့ လူကြိုက်များတဲ့ FormatFactory 3.2 ဖြစ်ပါတယ်။ format factory က မျိုးစုံရတော့ ဒီ converter ကို လူတိုင်း နီးပါး သုံးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသုံးရတာ လွယ်ကူတယ်။ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။
Posted by myu shadan at 11:40 PM No comments:
ကချင်တွေ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တော်လှန်ရေးစတင်လာခဲ့တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း
ကချင်ဘုိုးဘွားပိုင် ဖီမော်၊ ဂေါ်လံ၊ ကန်ဖန်ဒေသ (၁၅၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ကို ကချင်လူထုဆန္ဒမပါဘဲ တရုပ်ကို ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ တရုပ်-မြန်မာ နယ်နိမိတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုနေစဉ်။ (၁ အောက်တိုဘာ ၁၉၆ဝ)
ကချင်တွေ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တော်လှန်ရေးစတင်လာခဲ့တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတခုဖြစ်တဲ့ အတွက် မျှဝေလုိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုသာ ဆန့် ကျင်တာ မဟုတ်ပါ၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှ စတင်တဲ့ မဟာလူမျိုးကြီး တပြည်ထောင်စနစ်ကို ဆန့် ကျင်တော်လှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦနုဟာ စစ်အာဏာရှင် မဟုတ်ပါ.....
(Photo: U NU family library)
Posted by myu shadan at 11:08 PM No comments:
Posted by myu shadan at 11:05 PM No comments:
Posted by myu shadan at 11:03 PM No comments:
စာအုပ်အမည်းဝါ၀ါ - မြန်မာ တရုတ်၊ တရုတ် မြန်မာ
ရေးသားသူးဝါဝါ
အမျုိုးအစားးpdf
အရွယ်အစား12.9 MB
ဒီစာအုပ်လေးကတော့ ( မြန်မာ တရုတ်၊ တရုတ် မြန်မာ) တစ်ရုတ်လူမျိုးများ မြန်မာ လိုလေ့ကျင့်နိုင်ရန် နှင့် တရုတ် ဘာသာကိုလေ့လာခြင်သော မြန်မာလူမျိုးများအတွက်ပါ
အဆင်ပြေအောင် ရေးသားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ pdf စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာလိုသူများ အောက်က Download Link ကနေဒေါင်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား ...........
Posted by myu shadan at 10:59 PM No comments:
Internet Download Manager ဆိုရင် ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတိုင်း သိပါလိမ့်မယ်။ အခုကတော့ Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗားရှင်းလေးကတော့ လိုင်စင်ဗားရှင်း လုပ်စရာမလိုပဲ နှစ်ချက်ကလစ်ပြီး install လုပ်ရုံဖြင့် လိုင်စင်ဗားရှင်း ဖြစ်တဲ့အပြင် ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဗားရှင်းအသစ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်ရင်တော့ ကြိုက်တဲ့လင့် Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
share by : nyinaymin
Posted by myu shadan at 10:56 PM No comments:
MakeUp Pilot v4.5.2 Portable ကတော့ ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရာမှာ အရမ်းကောင်းပါတယ် တော်လေးလန်းတယ် အသုံးပြုဖို့လည်း လွယ်ကူပါတယ်... File Size ကတော့ 2.93MB ပဲရှိပါတယ်။ Software ကို install ပြုအလုပ်စရာမလိုပါ စက်ကိုလည်း မလေးစေဘူး ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး အသုံးပြုလို့ရတယ်။ လိုချင်ရင်လည်း အောက်မှာဒေါင်းသွားပါ မိတ်ဆွေတို့ လင့်ကနှစ်ခုပေးထားတယ် ဆင်ပြေတဲ့လင့်ကဒေါင်းသွားပါ။
Posted by myu shadan at 10:26 PM No comments:
Posted by myu shadan at 10:11 PM No comments:
Posted by myu shadan at 10:02 PM No comments:
Posted by myu shadan at 11:33 PM No comments: